MRICC - Xuzhou Fonnov Maaddooyinka Dhismaha, Co.
Waa maxay sababta FONNOV
2018 Qalabka aluminium aluminium aluminium ah ayaa la xirxiray saqafka sanduuqa
Waxaan nahay shirkad gaar ah oo suuqa, si firfircoon uga go'an tahay bixinta ugu wanaagsan ee 2018 Aluminium aluminium alwaax alwaax ah oo saqafka ah. 2018 Xayndaabka aluminium Aluminium aluminium ah ayaa la gooyey saqafka saqafka ayaa si gaar ah loogu talagalay iyadoo la isticmaalayo qalabka darajada sare iyo qalabka casriga ah ee isku dheelitirnaanta heerarka suuqa. Waxay bixisaa 2018 Aluminium aluminium alwaax ah oo saameeyay sanduuq
2018 Qalabka Dayactirka aluminiumka ah ayaa la xirxiray saqafyada saqafka
Soo laabtay khibrad khibradeed oo qoto-dheer, waxaanu awoodey inaanu soo saarno, la keeno iyo ganacsiga 2018 Dekor leh oo la xayiray aluminium la jaro xayndaabyada saqafka. Naqshadaynta qaabka, saqafyada ayaa waxaa soo saaray kooxdayada xirfadlayaal, kuwaas oo heysta aqoon ballaaran oo ku saabsan domainkan. Ka hor inta kama dambeyska ah, noo soo bandhigtay 2018 Decorative ganaax aluminium lagu xiray in foornooyinka saqafyada waxaa si adag u hubin by koox ka mid ah ...
Aluminium gudaha ah oo saqafka furan
Waxaan bixinnaa qalab ka sameysan aluminium aluminium furan oo ah sida saqafka aluminiumka iyo saqafka qorraxda oo lagu horumariyo heerarka warshadaha. Aad ugu habboon dalabyada kala duwan ee warshadaha, aluminiumada gudaha aluminium ee furan ayaa si sahlan loo rakibayaa. Macaamiishu waxay ka faa'iideysan karaan taxanaheena kala duwan ee cabbirka iyo midabada kala duwan oo ku saleysan qeexitaankooda iyo baahida gaarka ah. Sida clip ...
Foornada Birta/Waxyaabaha furan ee birta ah
2018 Qalabka aluminium ee macmacaanka ah
Si loola socdo mar walbaba soo afjarida macaamiisha, shirkaddayada waxay bixisaa tayo wanaagsan oo ka mid ah 2018 Qalabka aluminium ee aluminium ee macmacaanka ah ee macaamiisha qiimeeya. 2018 Qalabka aluminium ee macmacaanka ah waxaa laga dalbadaa isbitaallada, makhaayadaha, dhismaha xafiiska, saldhigyada, dukaamada iyo hudheelada. Waxaan u soo bandhigeynaa macaamiishan macaamiisha la ixtiraamo qiimaha macquulka ah. Nooca: Dabaysha ...
Aluminium ayaa la joojiyay saqafka
Qalabka aluminiumka ah ee la soo daayo wuxuu ka kooban yahay ururinta sumcadda ah oo lagu diyaariyey heer sare oo heer sare ah iyo sidoo kale naqshado xiiso leh oo soo jiidasho leh kuwaas oo ka dhigaya kuwa aadka u doorbidaaya oo looga baahan yahay suuqa. Dheeraad ah, qashinka aluminiumka ee la soo xiray ayaa la heli karaa sidoo kale annaga ayaa nala soo xulan kara doorashooyin faahfaahsan oo la xidhiidha soosaarista sida soo socota isbeddelada suuqyada. Waxaan sidoo kale caado u noqon karnaa ...
Calaashka Qalabka Birta ah/Foornada Birta
Qoob-ka-dhiska gabbal-galeedka weyn
Maaddaama ay yihiin xirfadlayaal caanka ah waxaanu awoodnaa inaanu bixinno xafiisyo gaaban oo qaali ah oo loogu talagalay xafiisyada, suuqyada iwm. Qaababka Daahfadhinta Daahfurka Buuxda ah waa bariga si loo rakibo lana ilaaliyo loona daboolo lakabyada ilaalinta ee aadka u adag. Gogol-xaadhista Big Debount Guga ...
Qaadashada Waxyaabaha Dhuxusha/Foornada Birta
Kala saar aluminiinka aluminiinka 129
Si aan u xajinno marnaba kama dhigno dalabaadka macaamiisha, shirkaddayadu waxay bixisaa tayo wanaagsan oo ka mid ah naqshadeynta aluminiumka aluminium 129 macaamiisheena qadarin leh. Hookahaan wuxuu ku yaalaa aluminium aluminium ah 129 waxaa laga dalbadaa isbitaalada, makhaayadaha, dhismaha xafiiska, saldhigyada, dukaamada iyo huteelada. Waxaan u soo bandhigeynaa macaamiishan macaamiisha la ixtiraamo qiimaha macquulka ah. Nooca: Dabaysha ...
2017 Aluminium aluminium ah oo lagu riixay saqaf leh midab khafiif ah oo qoryo leh
Waxaa lagu tiriyaa sida mid ka mid ah ururada caanka ah, waxaan ku lug lahaan doonnaa tiro badan oo 2017 Aluminiim ah oo lagu xakameynayo saqafka oo leh qoryaha qoryaha Faux. Alaabooyinkan 2017 Aluminium-ku-dhejisan ee saqafka leh midabka qoryaha qoryaha Faux ayaa lagu qaddariyaa dhismahooda adag, cabbiraad sax ah iyo waxtarka sare ee farsamada. Iyadoo ay ugu wacan tahay awoodda ugu fiican iyo nolol maalmeedka, waxay 2017 ...
2017 Naqshad qaboojiye dabaq ah oo loogu talagalay Kanada
Waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno baahida sii kordhaysa ee macaamiishayada ah iyaga oo siinaya iyaga si xushmad leh oo xeelad fiican leh loogu talagalay naqshadaynta qaabka xayiraadda ee 2017 ee Kanada. Si gaar ah loogu talagalay in lagu qanco shuruudaha macaamiisheena, xalalkeena 2017 Naqshadaynta santuuqa khaaska ah ee Kanada waa mid aad u qadarinaysa suuqa. Waxaanu adeeggan ku bixinaa qiimo macquul ah ee suuqa ...
2017 Aluminium aluminium ah oo lagu qurxiyo alwaax
Waxaanu macaamiishayada ku qanacsanahay in badan oo ka mid ah 2017 Aluminium aluminium ah oo lagu dhejiyo saqaf dherer ah oo la soo saaro iyadoo la isticmaalayo tayada wanaagsan ee GI iyo aluminium. Si loo hubiyo tayadeedu, naqshadeyaashayada imtixaannada tayada leh waxay tijaabiyaan nidaamkan xuduudaha kala duwan. Marka laga reebo tan, waxaan ku siinaynaa nidaamkan qaababka iyo qaababka kala duwan si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee ...
2017 Nidaamka saqafka aluminium ee aluminiumka
Ururkayagu wuxuu ku hawlan yahay soo saarida iyo bixinta noocyada tayada ugu fiican ee nidaamka saqafka 2017 Aluminium. Nidaamkan 2017 Aluminium-ka wuxuu ka kooban yahay qaabab aad u sarreeya oo aad u xaddidan kaas oo bixiya taageero weyn oo ku xiran fiilooyin kala duwan oo korantada ah iyo sidoo kale hab fudud oo dayactir sahlan iyo indhaha ku habboon. Nidaamka saqafka 2017 Aluminium ee aluminiumka ahi waa ...
2017 Shiinaha Shiinaha Shiinaha Hubinta Ganacsiga Aluminium
Waxaan u horseedaa bixiyaha shirkadda 2017 Shiinaha ee alaabooyinka aluminium-ka ah ee ka samaysan alaab bir ah, oo si fudud loo rakibay. Shirkadahan 2017 Shiinaha Shiinuhu waxay ku helayaan qiyaaso iyo qaabab kala duwan oo la mid ah doorka macaamiisheena. Shirkada 2017 Shiinuhu waxay ku xirantahay dhismayaasha ganacsiga, sida ...
Gaadiidka kuleylka ee saqafka sare ee aluminium
Waxaan nahay shirkad gaar ah oo suuqa, si firfircoon uga go'an tahay bixinta haanta dahabka ee saqafka sare ee aluminium aluminium. Gudaha saqafka sare ee aluminium ee aluminium ayaa si gaar ah loogu talagalay iyadoo la isticmaalayo qalabka ugu sareeya iyo qalabka casriga ah ee isku dheelitirka heerarka suuqa. Waxaa la bixiyaa Hot sale aluminium saqafka saqafka saqafka sare ee alaabadeena ayaa ammaanay by our ...
Qalabka 2017 wuxuu hubiyay Guddiga Aluminiinka Qalabka Aluminiumka ah
2017 Quality Ture Hubinta Aluminium Qalabka Aloolka Qalinka Aluminiumka ah ayaa la bixiyaa oo ka kooban ururin heer sare ah oo lagu diyaariyo heerarka sare ee biraha iyo sidoo kale naqshado xiiso leh oo soo jiidasho leh kuwaas oo ka dhigaya kuwa aadka u doorbidaaya oo looga baahan yahay suuqa. Dheeraad ah, waxa la soo bandhigay 2017 Quality Assured Aluminium Alleh Aqoonsi Guddiga Qabanqaabinta ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa anagoo nala soo xidhiidha soo saarid dhamaystiran ...
2017 saadaal dahab ah oo lagu iibiyo santuuqa jaalaha ah
Ururkayagu wuxuu ku hawlan yahay soo saarida iyo bixinta noocyada tayada ugu wanaagsan ee 2017 oo ah santuuq kubbadda iibka ah oo lagu iibiyo qurxinta. Qaabkan 2017-ka ah ee lagu iibiyo qurxinta biraha waa mid aad u sarreeya oo heerkul aad u adag oo bixiya taageero weyn oo ku xiran fiilooyin kala duwan oo koronto ah iyo sidoo kale hab fudud oo dayactir sahlan iyo indhaha oo habboon. Seenkeena 2017 our saadaal iibinta saqafka a ...
4mm Mirror Dhamaan Acp For Design Shape Mirror Panel Aluminium
Shirkadeena ayaa si weyn ugu qadarisay inay bixiso 4mm Mirror Finca Acp For Design Shape Mirror Panel ee macaamiisha. Waxaanu adeeggan u siinnaa qaybo kala duwan, guryo, iyo dhismayaal loogu talagalay dhisidda iyo been abuurka saqafka beenta ah iyada oo la adeegsanayo gypsum heer sare ah. Intaa waxaa dheer, this 4mm Mirror dhammeytirka Acp For Design Shape Mirror Guddi Aluminium ah Shaqada waxaa lagu fuliyaa hoosta ...
2018 Qalabka saameelka aluminium ee aluminiumka ah
Iyada oo taageerada wakiilada soo iibsiga waxaan u fidinnaa macaamiisheena oo tayo leh oo tayo leh 2018 Aluminium aluminium ah oo ku xiran saqafka saqafka ah ee ku habboon dhismayaasha ganacsiyada iyo guryaha iyo dhismaha guryaha oo leh cabbir qumman oo sax ah. Qalabkan 2018 Aluminium aluminium ah ayaa laga soo iibsaday saqafyada kalsooni leh ee suuqa oo hoos yimaada feejignaanta wakiillada soo iibsiga. Marka laga reebo...
Qalabka farsamada cusub Dhuxulada dhuxushu waxay furan yihiin saameeynta unugyada
Saqafka la jeexjeexay ayaa laga saarayaa saqafka weyn ee loo yaqaan "grids". Dhaqdhaqaaqa birta, ama birta-farsamaysan, ayaa si fiican u shaqeynaya saqafka ganaaxa. Xuduudaha biraha guud ahaan waxay ku yimaadaan dhammaadka cad. Qalabka cusub Dhuxulada dhuxushu waxay u fidisaa santuuqa unugyada kala duwan ee alaabta tayada sare leh iyada oo loo marayo khadadeeda ballaaran ee naqshadeynta hababka iyo ikhtiyaarrada la isugu daro faybar, (Lay in and Clip in), ama ...
Saqafka birta ah, saqafka aluminiumka ah ee saldhigga tareenka
Waxaan nahay qalab loogu talagalay bixinta heerka sarre Premiumka birta ah, saqafka aluminium ee albaabka tareenka. Badeecadeenna la soo bandhigay waxaa loogu talagalay ka dib cilmi baaris weyn iyo horumarin si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisheena qiimaha leh. Nidaamkeena nalalka ah ee birta, Aluminiinka furan ee saldhigga Tareenka waxaa la soo saaraa iyada oo la adeegsanayo qalabka tayada leh ee tayada fiican leh iyadoo loo eegayo feejignaan adag oo khubaro ah. Bixinta Birta ...
Qalabka alwaaxda ee aluminium ee alwaaxa loogu talagalay derbiga guddiga
Waxay la soo baxday koox ka mid ah xirfadlayaal aad u khibrad badan leh, waxaan awoodnay inaan soo saarno oo aan siinno saqafka alwaaxa aluminium ee alwaaxa loogu talagalay derbiga gudaheeda. Qalabka korontada ee alwaaxda leh ee loogu talagalay saqafka alwaaxa ee loogu talagalay derbiga guddiga waxaa si ballaaran looga dalbaday Madaarka, Isbitaalada, Gawaarida, Gawaarida, Gaadiidka, Meelaha Guryaha Dadweynaha iwm. Nooca: Gubashada Qabow Meel Galka: Jiangsu, China (Mainland) Magaca Brand: .
Ku saabsan FONNOV
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing saqafka iyo saqafka, Aluminium-saarid, Iyo sidoo kale maro budada ah. FONNOV, oo ah shirkad hooseysa, waxay ku jirtaa waxqabadka iibka iyo suuqgeynta ganacsiga dibada.
Qaadashada Waxyaabaha Dhuxusha
Calaashka Qalabka Birta ah
Qalabka Dabeecadda Qalabka Leh
Waxyaabaha furan ee birta ah
2017 qurxinta baloogyada balooga W300 ee xayiraadda
Qalabka Qalabka Qalabka ah
Dhaqdhaqaaqa caydhoobka ah ayaa xirxiray alumuunta aluminiinka la ballaariyay
Xaqiijinta ganacsiga 600 * 600 saqafka saqafka ee dhismaha xafiiska
Qurux qurux badan oo aluminium ah oo lagu qurxiyo qurxinta dibadda ee Shiinaha
10 Years Experience Aluminium dab-damis ah oo lagu daboolay saqafka xNUMX 'x 2' oo leh SGS
© 2018 MRICC | Sitemap XML
Copyright © Xuzhou Fonnov Qalabka Dhismaha, Co.